Ogaden News Agency (ONA) – Filimaan Cusub oo cadeynaya Ciqaabta daran ee loogeysto Maxaabiista Jeel Ogaden oo laga siidayay SVT
Filimaan Cusub oo cadeynaya Ciqaabta daran ee loogeysto Maxaabiista Jeel Ogaden oo laga siidayay SVT
Posted by ONA Admin	/ September 16, 2012
SVT TV ayaa soo dayay filimaan murugo leh iyo caddeymo cusub oo aan cidna inkiri karin oo cadeynaya ciqaabta lamarsiiyo shacabka Somalida Ogadeniya markay ku jiraan xabsiyada ay kamidka yihiin Jeel Ogaden iyo jeelasha kale ee lagu ciqaabo bulshadan aan waxba galabsan.
SVT oo Filimaan (Video) i tus oo itaabsi ah ka helay gudaha Ogadeniya ayaa in muddo aheydba tododobaadkii lasoo dhaafay maalin kasta laga soo daynayay TV-yada SVT muuqaalo looga waramayo qadiyada Ogadneiya iyo tacadiyadii loo geystay wariyaashi Ree Sweden.
TV-ga ayaa bilaabay eega Filimaan kale oo si gaar ahaaneyd ula xidhiidha tacadiga loo geysto shacabka Somalida Ogadeniya. ee ku jira Jeelasha. Kuwaas oo isugu jira caddeymo ay Ciidamada Gumeysiga Woyanaha u adeega oo ciqaabaya dadka iyo qaabka ay u ciqaabaan lagu arki doono. Sidoo kale waxaa Wareysiyo laga soo qaaday dad ku nool xeryaha Qaxootiga oo kasoo badbaaday ciqaabahaas balse jidhkooda ay wali ka muuqato dhaawacyadii loo geystay. Waxaa kamid ah gabdho lagusoo fara xumeeyay Jeelashaas oo ka hadlaya dhibkii soo gaadhay. Waxaa cadeymahan ay sheegayaan oo kale dad badan oo u dhintay dhaawacyadi iyo jidh dilkii loogu geystay jeelashaas oo jeelasha dhexdooda ku naf waayay.
Hadda ka hor haddey sheeko uun kugu aheyd. Waxaa SVT uu haya waxaas oo dhan oo i tus oo taabsi ah. Gumeysiga Ethiopia ayaa hada ka hor lagu yiqiinay innu dafiro gumaadka shacabka Somalida Ogadeniya. Balse cadeymahan ay SVT gacantooda ku jira ayaa ah kuwa aysan dafiri karin.
Waxaa kamid ah dadka SVT ay wareysatay cadeymaha kale ka sokow. Gabadh ku jirta Filimkaan kore. Gabadhan ayaa la cidamada gumeysigu kubsadeen iyada iyo gabdho kaleba. Gabadhaha Somalida Ogadeniya dhaqanka ku adag oo Jidhkoodana aan ogoleyn in la arko ayaa hadana gabadhan waxay ku dhiiratay inay tusto nabara aad u qalaad oo kasoo gaadhay madaxa garaaci iyo ciqaabti gumeysiga uu u geystay oo jidhkeeda ka muuqda.
Gabadha ayaa oohin iyo murugo badan ka muuqdaa markii wareysiga ay siinaysay SVT. qof kasta oo arka muuqaalkasna ku reebaysa murugo noloshiisa inta ka hadhay uusan illaawi karin.
Waxaa kale oo ku jira muqalka Filimkan wiilal ka hadlaya dhibatadi soo gaadhay naftooda. Waxay ka xog waramayaan in barkad lagu ridi jiray qabow. Halkaasna Biyaha Koronto inta lagu qabto lagu deyn jiray korontadaas. dad badan oo u dhintay korontadi lagu qabtay ayay wiilashu ka warameen. Waxaa arrin mucjiso ah in dadkaas la qaawin jiray oo xubnaha taranka laga garaaco markii barkada laga soo saaro.
Hadaba waxaa filimkan ku jira Ciidamada Woyanaha kuwa u adeega oo qiranaya qaabka ay dadka u ciqaabaan iyo siday u gumaadaan. Iyaga oo madaxdooda uga waramaya dadkii ay laayeen ee xabsiyada ku dhex laayeen iyo dadka ay goobaha kale kusoo dileen isla markaasna isku abbaal marinaya shacabkaas ay xasuqayaan.